Yemukati yekupisa injini supercharger bhokisi rakabatana rakagadzirwa neGE kambani yeUnited States neCRRC, uye yakaitwa nekambani yedu.Material: yakakosha alloy cast iron, uremu 360kg.Iyo mhango yemukati yakaoma uye maitiro ekukanda akakosha.Iyo yakapetwa kaviri dhaka musimboti inogamuchirwa, uye machining geometric kushivirira ndeye 0.009.Parizvino, mileage yekutyaira imamiriyoni emakiromita.Huwandu hwekugovera wepagore ndeye 500 seti.
Iyo yakazara X-ray yekuona kukanganisa kuri pamusoro pegiredhi 2, uye nzvimbo yakashongedzwa haina hurema, inoverengera inodarika makumi masere muzana emusika weChina wakaiswa.
Iyo workshop iri kure nenzvimbo yekuvhiya.Naizvozvo, zvinodikanwa kutyaira nekukurumidza uye nyore kutendeuka.Iyo hubhu yetirakita inofanirwa kutarisisa kuchengetedzeka, kuwanikwa uye kusapfeka.
Product parameters: aruminiyamu pombi okunze dhayamita 25mm-80mm, rusvingo ukobvu 3mm-10mm, kushivirira ± 0.1mm;
Kukwikwidza mukana: yakagadzikana mhando, yakanaka elongation uye yakasimba tishu density;
Munda wekushandisa: kupisa kwekuchinjana chinhu indasitiri yekutsinhana kwekupisa uye kupisa kupisa;
Minimum order yakawanda: 500 kg;
Kutenderera kwekugadzira: 5 mazuva ekushanda;